China ZAZE Petro-chemical Process Pump-1 ifektri abakhiqizi | I-Convista
Thina, ngokuya ngokwakhiwa nokukhiqizwa kwezinga le-API61011th Centrifugal Pump lePetroleum, Petrochemical and Natural Gas Sectors, sithuthukisa amaphampu enqubo ye-petro-chemical.
Umzimba omkhulu wepompo, ngokwendlela yokwesekwa, uhlukaniswe waba yizinhlaka ezimbili: i-OH1 ne-OH2, futhi impeller ingezakhiwo ezivulekile nezivaliwe.
Okukhona, i-ZA ngeka-OH1, impeller evaliwe; kanti iZAO ngeka-OH1, ivulekile;
I-ZE ye-OH2, ngeyodwa evaliwe, kanti i-ZE0 inge-OH2, ene- open.
I-ZE pump, ngokusho kwebanga lokucindezela, iphinde ihlukaniswe ngezigaba ezintathu: D, Z no-G (D ngokuvamile akubhaliwe) ngezimo zokusebenza.
Ibona izicelo eziningi ezimweni zokuhamba ze-high and medium-pressure clean noma i-particulate, ezonakalisayo nezigqoke izimboni ezifana nokuhlanzwa kukawoyela, imboni yamakhemikhali yamalahle, imboni ye-petrochemical, ubunjiniyela bamakhemikhali kasawoti, ukuvikelwa kwemvelo, iphepha le-pulp nokwenza amaphepha, ukumuncwa kwamanzi olwandle, ukwelashwa kwamanzi, kanye nensimbi, ikakhulukazi ukuthuthwa okufuna kakhulu umfutho ophakeme, ubuthi, ukutsha, iziqhumane, nezinto ezinamandla ezonakalisayo emikhakheni enjengemishini ye-olefin, ulwelwesi lwe-ionic caustic soda, ukukhiqizwa kukasawoti, umanyolo, idivayisi ye-reverse osmosis , ukususwa kwamanzi anosawoti olwandle, i-MVR nokuvikelwa kwemvelo, njll., kukhombisa amandla amakiwe.
Ukugeleza: Q = 5 ～ 2500m3 / h Inhloko: H ≤ 300m
I-ZE (ZEO) Z
I-ZE (ZEO) G
Isb.: ZEO 100-400
I-ZEO -------- ZE Pump ikhodi yochungechunge
O Impulanzi evulekile
Ububanzi be-100 -------- Outlet: 100 mm
400 -------- Ububanzi begama lempepho: 400 mm
1. Ubungqabavu namandla kuthuthukiswa kakhulu ngokwandisa ukwakheka kokugunda. Lokhu kuphakamisa ukuthembeka kwempompo, kungathembisi futhi ukuthi kungukuphila isikhathi eside futhi kwehlise nezindleko zokusebenza.
2. Umzimba wokuthwala wakhelwe ezakhiweni ezimbili zokupholisa ngokupholisa kwemvelo namanzi. Endabeni yobukhulu obuphakathi kuka-105 ℃, incoma ukuthi ifakwe uhlelo lokupholisa amanzi, elehlisa izinga lokushisa lokuthambisa ngokupholisa uwoyela wokugcoba endaweni engcono yokusebenza;
3. Ikhava yepompo ifakwe Isikhala sokupholisa, esehlisa izinga lokushisa lomshini wokufaka uphawu lomshini ngokupholisa umgodi impilo yensizakalo ende.
4. I-pump impeller nut ikhiyiwe ngokwethulwa kwe-washer yokuzikhiya enegunya lobunikazi laseJalimane. Ngenxa yokuwasha, amantongomane akhululeki uma kwenzeka ukujikeleza kwepompo okuguqukayo noma ukudlidliza. Lokho kusho ukuthi ipompo lidinga ukusebenza okufuna kakhulu izimo nezimo zokufaka.
5. Lezi zimpompo zochungechunge lokugeleza okukhulu ziqukethe izidumbu ezinezindlu ezimbili, ezenzelwe ukulinganisa kahle amandla obuso akhiqizwa ngaphansi kwezimo zokusebenza ezingakhelwanga. Ngaphezu kwalokho, ifuna amandla we-axial olinganiselayo esebenzisa izindandatho zokufaka uphawu nezimbobo zokulinganisela.
6. Lezi zinhlobo zokufakwa uphawu kweMechanical njenge-integrated, single-terminal noma i-double-terminal, kanye nezinhlelo zokufaka uphawu ezisizayo ezihambisanayo zingasetshenziswa ngokuya ngesilinganiso esizothuthwa, ukuze kwenziwe ukubekwa uphawu nokupholisa kuthembeke. Ukubeka uphawu nokugeza kuzokwenziwa ngokuya nge-API682. Ukufakwa uphawu kwe-pump shaft kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo ezithile zabasebenzisi.
7. I-shaft inikezwa ngezinyathelo ze-spanner, ezichaza ukushelela ekubhekaneni nabasebenza ngeziphepheli, ukuze kusetshenziswe kahle ukusebenza kahle ekufakweni nasekuqothulweni.
8. Ngokuhlanganiswa kwe-diaphragm enwetshiwe, ipompo ayidingi ukuqedwa kwepayipi nesekethe lokulungiswa nokulungiswa kwawo wonke umshini.
Langaphambilini I-ZAO Solid Particle Delivery Pump
Olandelayo: Iphampu yeZirconium
Spring ulayishe ongaphakeme lift uhlobo isigwedlo ukuphepha v ...
Isihlungi sohlobo T
Uhlobo olugcwele ngokugcwele lwentwasahlobo ngokuphepha kwesigwedlo ...
I-9110 Valve Air Valve Yendle